Goobaha - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Wada-hawlgalayaasha Teknolojiyada oo dhan DHALINYARADA
Mashaariic badan oo aan u soo saarnay macaamiisheena, waxaan la soo shaqeeyay shaqsiyaad cajiib ah; kuwaas oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada - fannaaniinta, maareeyayaasha mashruuca, daaweeyayaasha, fannaaniinta hiwaayadda iyo sawir qaadayaasha. Mashaariicdani waxay noqdeen kuwo si buuxda uga qaybqaata macaamiisheena ama il weyn oo dakhli dadban ah. Waxaan la shaqeeynaa shaqsiyaad si aan uga caawino inay ka dhisaan alaabtooda meel xoqan, codsi NewGenApps's ganacsi iyo awoodaha tignoolajiyada.
Ma culays saarno samaynta macaamiisha. Hase yeeshe, waxaanu culayska saarnaa kasbashada Shuraakada. Dad badan baan la shaqaynay GOORMUU dhisidda MVP-yada, kuwaas oo qaarkood ay u socdeen si ay u helaan maalgalin ganacsi oo aad u weyn. Waxaan fahamsanahay baahida iyo caqabadaha ee bilowga oo waxaan si dhow ula shaqeynaa sidii shuraako si aan u qeexno istiraatiijiyadooda wax soo saarka guud. Waxaan bixinnaa maareyn badeecadeed oo socota - kooxdayada ayaa si dhakhso leh oo hufan u gaarsiin karta natiijooyinka bilowga app
Waxaanu kaa caawinaynaa sidii aad u horumarin lahayd daruur iyo xeeladda dhaqdhaqaaqa, dejinta xalalka iyo u gudbinta abka adiga ganacsi baahida. Waan fahamsanahay taas ammaanka, tayada iyo waxqabadka ayaa ugu muhiimsan marka ay timaado horumarinta apps ee ganacsi. Waxaan horumarin karnaa ganacsi xalalka ku salaysan macaamiisheena 'iyo shuruudaha warshadaha.
ogoow intaa ka badan